Maxay ka wada hadli doonaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maxay ka wada hadli doonaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti?
Maxay ka wada hadli doonaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti?
February 20, 2019 February 20, 2019 Cali Yare434
Odayaasha Beelaha Hawiye oo shir uga furmay Muqdisho (Sawirro)
Somaliland oo ka hadashay xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya
Eng. Yariisow iyo Taabid oo kulankoodu ugu horeeyey yeeshay
Shirka Madasha Wasaaradaha A. Dastuurka oo Muqdisho ka Furmay (Sawirro)
Alshabaab oo goordhow qabsaday Tuulada Qaayib ee gobolka Galgaduud
Farmaajo oo safar qarsoodi ah dibadda ku aaday